Fitsidihana ny tany efitra Tabernas na ny Espaniola Far West | Vaovao momba ny dia
Ny Desert Tabernas any Almería dia iray amin'ireo fahita amin'ny zava-boahary manaitra ny mpandeha mitsidika an'i Espana. Indrindra fa io irery no faritra efitra amin'ny kaontinanta eropeana. Izy io dia eo anelanelan'ny Sierras de los Filabres sy Alhamilla ary nalaza eran'izao tontolo izao raha tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX dia nanjary sarimihetsika goavambe natao ho an'ny famokarana nasionaly sy iraisam-pirenena.
Ny masoandro, mari-pana ambony ary ambany ny orana dia namorona tandavan-tany misy fiainana masiaka be, izay mponina kely nefa sarobidy amin'ny karazam-biby sy zavamaniry. Voasaron'ny renirano sy boulevards maina izy io, amin'ny takariva iny rehefa afaka misaintsaina ny hakantony tsy manam-paharoa ianao amin'ny alàlan'ny taratry ny hazavan'ny masoandro eo amin'ny tontolon'ny volana.
Hollywood dia nametraka ny endriny mampatahotra sy maina amin'ny sarimihetsika Wild West angano toa ny 'The Good, the Ugly and the Bad' fa amin'ny sary mihetsika maoderina kokoa toa ny 'Indiana Jones sy the Last Crusade'. Noho izany, ilaina ny manontany tena, inona ny momba ny Efitr'i Tabernas izay manintona ny sain'ny tontolon'ny sinema amin'ny fomba mahery vaika?
1 Andriamby ho an'ny ecotourists
2 Paradisa ho an'ny mpamokatra sarimihetsika
2.1 Valan-javaboary Cowboy Cinema
2.2 Ny làlan'ny Dollar Trilogy
2.3 Trano Sinema Almería
2.4 Fetiben'ny Sarimihetsika Iraisam-pirenena Almería
Andriamby ho an'ny ecotourists
Rehefa tonga any amin'ny Desert Tabernas ilay mpitsidika dia ho hitany eo noho eo fa eo amin'ny tany mifanohitra izy ireo. Mitambatra ao Cabo de Gata miaraka amin'ny tany karakaina ny Mediterane mafana, izay manome ny iray amin'ireo sary mahafinaritra indrindra amin'ny morontsirak'i Andalusia. Ho fanampin'izany, ny tombotsoany amin'ny tontolo iainana dia ampiakarina amin'ny sandan'ny tontolo iainana avo lenta satria misy karazan-javamaniry sy biby tsy manam-paharoa any Eropa ary na dia eto an-tany aza noho ny fahatereny. Noho ny haren'ny avifauna indrindra dia nambara ho faritra fiarovana manokana ho an'ny vorona ity toerana ity.
Amin'izao fotoana izao dia azo atao ny manao zotra amin'ny 4 × 4 na an-tongotra hahafantarana ny Desert Tabernas amin'ny antsipiriany. Traikefa tsy manam-paharoa izay tsy ho adinon'ilay mpitsidika.
Paradisa ho an'ny mpamokatra sarimihetsika
Iray amin'ireo loharanom-bolany ekonomika be mpitrandraka indrindra ao amin'ny Desert Tabernas dia ny toerana nananganana ny sarimihetsika isan-karazany. Raha ny marina, ny Desert Tabernas no paradisa sarimihetsika an'i Hollywood nandritra ny taona 60 sy 70 tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Eto dia napetraka ny seta hamerenana ny American Far West ary ny kintana toa an'i Clint Eastwood, Brigitte Bardot, Anthony Quinn, Claudia Cardinale, Alain Delon, Sean Connery, Raquel Welch ary Orson Welles dia namakivaky azy ireo, ankoatry ny maro hafa. Ny tontolony dia nanjary ny seho an-tsehatra avy amin'ny sarimihetsika mahafinaritra toa ny: "Lawrence of Arabia", "Cleopatra", "The good, the ratsy and the bad", "Death has a price" or "Indiana Jones and the last crusade" .
Valan-javaboary Cowboy Cinema
Rehefa nifarana ny tazo filma tandrefana, Ireo set dia nampiasaina hanamboarana valan-javaboary antsoina hoe Parque Oasis Poblado del Oeste izay anaovana tanàna kely iray avy any Wild West sy ny sasany amin'ireo sehatra angano an'ny karazana tandrefana. Amin'izany dia azonao atao ny manatrika seho toy ny duel eo anelanelan'ny lehilahy mitam-basy, ny fandrobana banky, ny dihy azo atao canona ao amin'ny saloon, sns. Azonao atao koa ny mitsidika tranombakoka telo mahaliana toy ny:
Tranombakoka Sinema: Izy io dia manana andiana projecteur, afisy (afisy amin'ny takelaka andrefana alefa ao Almería) sy ireo kojakoja samihafa izay hahatonga anao hankafy ny fitsangatsanganana ny tantaran'ny kanto fahafito, ary hamarana ny fitsidihana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny taloha ampiasaina.
Garden Cactus: Ity zaridaina ity dia misy karazana kaktosy mihoatra ny 250 avy amin'ny lafivalon'ny planeta. Ny vidin'ny tapakila dia 22,5 euro ho an'ny olon-dehibe ary 12,5 ho an'ny ankizy.
Ny Parque Oasis Poblado del Oeste dia misokatra amin'ny faran'ny herinandro sy amin'ny faran'ny herinandro lava. Hatramin'ny Paska dia misokatra isan'andro izy fa raha mila fanazavana fanampiny dia tsara ny miantso ny 902-533-532.
Ny làlan'ny Dollar Trilogy
Tamin'ny taon-dasa, ny Junta de Andalucía dia nanolotra làlana antsoina hoe The Dollar Trilogy hanomezam-boninahitra ny lasa ny Desert Tabernas ho toy ny sarimihetsika. Ity làlana ity dia mitondra antsika any amin'ireo enclave izay misy ny Trilogy dolara nataon'i talen'ny Sergio Leone, loharanom-baovao amin'ny sokajy tandrefana misy ny kasety 'Ho an'ny dolara vitsivitsy' (1964), 'Death has a price' (1965) and 'The good, the ugly and the bad' (1966).
Ity fandraisana andraikitra ity dia ao anatin'ny tetikasan'ny Great Film Route amin'ny alàlan'ny Andalusia, izay mikendry ny hanolotra fitsangatsanganana an-tsokosoko ity vondrom-piarahamonina Espaniôla ity izay manan-danja miaraka amin'ny toerana fanaovana ny sarimihetsika izay ampahany amin'ny famokarana sarimihetsika lehibe nalaina sary ao amin'ny faritra.
Ny làlan'ny Trilogy of the Dollar dia manana tanjona ara-panoharana ihany koa satria io no làlana sinema voalohany mamaky ny faritanin'i Almería, noho ny lanjan'ilay tandindona sy ny lazany nananany tamin'ny taona 60 tany amin'ny sinema iraisam-pirenena amin'ny ankapobeny ary tamin'ny lafiny tandrefana indrindra.
Trano Sinema Almería
Sary avy amin'ny Almería Tourism
Ao an-tanànan'i Almería, Calle Camino Romero, 1 - Villa Blanca, misy ilay antsoina hoe Casa del Cine de Almería izay mamerina mijery ny lasa sinematografikan'ny faritany mba hitahirizana ny fahatsiarovana ara-tantara. Ity habaka ity, ho fanampin'izay, dia trano honenan'ireo mpandika teny taloha nandritra ny fakana sary ny sarimihetsika, anisan'izany i Clint Eastwood sy Brigitte Bardot. Na izany aza, ilay nanome laza bebe kokoa ny trano dia i John Lennon izay nandray anjara tamin'ny fakana sary tamin'ny sarimihetsika How I Won the War ary tamin'ny fotoana nijanonany dia namorona ny hira Strawberry Fields Forever izy.
Ny fidirana mankao amin'ny Almería Film House dia mitentina 3 euro ho an'ny ankapobeny ary 2 euro raha ahena. Azo tsidihina isanandro isan-kerinandro izy io fa tsy maintsy mijery ny ora fisokafana.
Fetiben'ny Sarimihetsika Iraisam-pirenena Almería
Tamin'ny Novambra 2016, nahatratra ny andiany faha-XNUMX ny Fetiben'ny Sarimihetsika Iraisam-pirenena Almería miaraka amin'ny tanjona ny hametraka ny tenany ho iray amin'ireo lohan-kevitra lehibe amin'ny karazana manerantany. Miaraka amin'ity festival ity, voatazona ny fifandraisana nentim-paharazana eo amin'i Almería sy ny sinema ary napetraka ho an'ny matihanina, mpahay tantara ary mpitsikera ny sarimihetsika ireo toerana hihaonana sy hisaintsainana., manohana ny fifandraisana amin'ireo fetibe sarimihetsika nasionaly sy iraisam-pirenena hafa.
Toy ny tamin'ny fanontana teo aloha, tamin'ny taon-dasa dia ny fiaraha-miasa amin'ny fiarahamonina Almeria indray no nandaminana ny festival.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Almeria » Fitsidihana ny tany efitra Tabernas na ny Espana Far West